ဆိုးသွမ်း: August 2008
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:17 PM
ကိုယ့်မိသားစု အပေါ်မှာထက် တခြားသူတွေ အပေါ် ကျွန်ူပ်တို့ဆက်ဆံရေး ပိုကောင်းနေတာ ရယ်စရာ မကောင်းဘူးလား ။
ကိုယ့်သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်အပေါ် အကောင်းမြင်စေချင်ကြတယ်။ အခိုက်အတန့် သိကျွမ်းရတဲ့ သူတွေရဲ့ ပြောစကားကို ဂရုတစိုက် နားထောင်တယ်။ ကိုယ့်သားသမီးတွေ ဒါမှမဟုတ် မိဘတွေထက် သူတို့ကို အချိန်ပိုပေးတက်ကြမိတယ်။ကျွန်ုပ်တို့အတွက် မိဘတွေ နေ့စဉ်အနစ်နာခံနေကြပေမယ့် မိဘအတွက် ခေါင်းထဲမှာ ထည့်မတွေးမိကြဘူး။ တစ်ဖက်က ကြည့်ရင် သူစိမ်းတွေရဲ့ မပြောပလောက်တဲ့ အကူအညီ အသေးအမွှားလေးတွေကို စိတ်ထဲမှာ သံမှိုစွဲသလို စွဲထင်နေတတ်ကြတယ်။
ကိုယ်နဲ့ သိပ်ပြီးရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်း မရှိတဲ့ သူတွေကို ညစာဖိတ်ကျွေးဖူးသလား......
အဲဒီလို ကျွေးမွေးဖို့အတွက် လေးငါးနာရီကြာ ဈေးဝယ်ထွက်ရတယ်။ တစ်ပတ်လုံး ရှာဖွေထားတဲ့ငွေ ပြောင်ပါလေရော။ ခင်ဗျားရဲ့ အကောင်းဆုံး ပန်းကန် ၊ ဇွန်း ၊ ခရင်း တွေနဲ့ ထမင်းစားပွဲကို တစ်ညနေလုံး ပြင်ဆင်ရတယ်။ ကိုယ့်မှာမလုံလောက်တဲ့ ဖန်ခွက်လှလှလေးတွေ အိမ်နီးနားချင်းတွေဆီက ငှားရတယ်။ အိမ်သန့်ရှင်းရေး လုပ်ရတယ်။ အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ ထိုသူတွေကို ပြန်တွေ့ချင်မှ တွေ့မယ် ၊ တခါတလေ ဘယ်တော့မှ ပြန်မတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး။
နောက်တပတ် အဖေနဲ့အမေ လာလည်ကြတယ်။ အချိန်မရှိလို ဖွယ်ဖွယ်ရာရာ တည်ခင်း မကျွေးလိုက်နိင်ဘူး။ မိဘတွေ အပြန်မှာ သစ်သီးလောက်သာ ကြွပ်ကြွပ်အိတ်နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်နိင်တယ်။
ဒါကြောင့် တခါတလေမှာ အခြေအနေတွေကို တစ်မျိုးတစ်ဖုံ ပြောင်းပစ်သင့်ပါတယ်။ အဖေနဲ့အမေ အတွက် ပုဇွန်ထုပ်နဲ့ ၀က်သားဟင်းတွေကို သိမ်းထားပြီး ၊ သူစိမ်းတွေ ညစာစားဖို့ လာတဲ့အခါ “ သစ်သီးကို ကြွပ်ကြွပ် အိတ်နဲ့သာ ထည့်ပေးလိုက်ပြီး ” တောင်းပန်ပါတယ်ဗျာ အရင်အပတ်က ခင်ဗျားတို့ လာလည်ရင် ကောင်းမှာ။ အဖေနဲ့အမေ လာလည်ကြတယ်လေ ”
“ မိဘတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို ဘယ်တော့မှ မေ့မထားပါနဲ့ ”
5 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:31 AM
ခါတိုင်းထက်လည်း သစ်ရွက်တွေ ကြွေပါလိမ့်မယ်
ဂစ်တာအိုနဲ့ ပေ့ါသီချင်းတပုဒ်ကို တီးခက်တိုင်းလည်း
ငါ့မျက်ရည်တွေလို့ သဘောထားပေးပါ ဒဏ္ဍာရီ
ကြေငြာခမပေးပဲ ငါတို့ကို ခွဲပစ်တော့မယ်
ငါတို့ အလွမ်းတွေကို ပျက်ရည်ပြုတော့မယ်
ဘ၀ နှစ်ခုရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု့ကို အဆုံးသတ်ပေးတော့မယ်
လက်နှစ်ဖက်ကိုဆန့်ရင်း အများကြီးချစ်တာပေ့ါလို့ ပြောတဲ့မင်းကို
3 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:21 PM
ပျက်စီးခြင်း ငါးပါးဆိုက်နေသူတစ်ဦးနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခု စပ်တူ လုပ်ကိုင်ရတက်သည်။ ညဦးပိုင်း အချိန်မှန် အလည်လာလေ့ရှိသော မုဆိုးမတစ်ဦးကြောင့် အများ၏ စပ်စုမေးမြန်းခြင်း ခံရတက်သည်။ စင်မြင့်ပေါ်တက်ပြီး သီဆိုဖျော်ဖြေနေစဉ် ပြောင်းဖူးရိုးဖြင့် ပစ်ပေါက်အားပေးခြင်း ခံရတက်ပြီး သင်တန်းဆင်းပွဲ၌ ဆုတက်ယူစဉ် ပုဆိုးကျွတ် ကျတက်သည်။ အတက်ပညာအားဖြင့် ထောင့်မကျိုး အချိုးမကျ နေထိုင်ပြသော နည်းလမ်းတရပ်ကို ဖတ်မှတ် ဆည်းပူးရတက်သည်။ ပျိုရွယ်သူတို့ အချစ်ရေးကဏ္ဍ၌ လိပ်ခေါင်းရောဂါရှိသူ အဆိုတော် တစ်ဦးနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်ရ တတ်သည်။ ကျန်းမာရေး ပိုင်းဆိုင်ရာအားဖြင့် လူထူထူရှိလျှင် လေလည်ချင်သည့် ရောဂါတစ်ခု ဖြစ်ပွားတက်သည်။
ယတြာ ။ ။ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ၅ နာရီတိတိတွင် ရေခဲမုန့်တစ်ခုကို ငရုတ်သီးမှုန့်ဖြူးပြီး ကုန်စင်အောင် စားလိုက်ပါ။
ကောင်မလေးနှင့် အပိုင်စုံတွဲ ခုတ်နေစဉ် ကလေးငယ်တစ်ဦးမှ ဖေဖေကြီးဟု နှုတ်ဆက်ခြင်း ခံရတက်သည်။ လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှ ဆီတိုင်ကီတစ်လုံး ပျောက်ဆုံးမှု အတွက် အ၀တ်အားလုံး ချွတ်ပြပြီး အရှာဖွေခံရတက်သည်။ ရပ်ဝေးရှိ အသိမိတ်ဆွေထံမှ ထူးထူးဆန်းဆန်း လက်ဆောင်အဖြစ် အိမ်သာသုံး စက္ကူတစ်လိပ် ရရှိတက်သည်။ အတက်ပညာအားဖြင့် နာမည်ကြီး ထမင်းငတ်သည့် နည်းပညာတစ်ရပ်ကို ဖတ်ရှု့လေ့လာရတက်သည်။ ပျိုရွယ်သူတို့ အချစ်ရေးကဏ္ဍ၌ ငုံထားမတက် အချစ်ကြီး ချစ်တက်သူတစ်ဦးနှင့် ဖူးစာဆုံရတတ်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအဖို့ အိမ်ထောင်ဖက်၏ အစားနှင့် ပါးစပ်မပြတ်သော အကျင့်ကြောင့် စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေရတက်သည်။
ယတြာ ။ ။ ယခုအပတ်အတွင်း မိမိနာမည်ကို အခေါ်ခံရတိုင်း ကြောင်အော်သံကဲ့သို့ ထူးလိုက်ပါ။
အချိန်ဆွဲ လုပ်ကိုင်တတ်သူ တစ်ဦးအပေါ် အားမလို အားမရ ဖြစ်နေရတက်သည်။ နံနက်စောစော မင်္ဂလာယူနေစဉ် အသုဘ အခေါင်းတစ်ခု လိပ်စာမှားပြီး ၀င်ရောက်လာတက်သည်။ ပြပွဲခန်းမထဲ၌ မိမိအား အဖိုးတန် ရှားပါးပစ္စည်း သဘောမျိုးဖြင့် ၀ိုင်းအုံကြည့်ရှု့ခြင်း ခံရတက်သည်။ လူမှုရေးအရ ကူညီသော အားဖြင့် ညဉ့်နက်သန်းခေါင်အချိန် ချောင်းမြောင်း စောင့်ဆိုင်းနေသူတစ်ဦး အန္တရယ်ကင်းရှင်းရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရတက်သည်။ ပျိုရွယ်သူတို့ အချစ်ရေးကဏ္ဍ၌ မျက်လုံးပေကလပ် ပေကလပ် စကားပြောတက်သူ တစ်ဦးထံမှ ရည်းစားစာကို လက်ခံရရှိတက်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအဖို့ ခါးမှ လုံချည်ပင် ချွတ်ပေါင်ပြီး လောင်းကစားလေ့ရှိသော အိမ်ထောင်ဖက် အပေါ်တွင် ချစ်အားပိုရကိန်းရှိသည်။ ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍအားဖြင့် လေးဘက်ထောက်ပြီး လမ်းလျှောက်ချင်သည့် စိတ်ဝေဒနာတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားခံစားရတက်သည်။
ယတြာ ။ ။ နံနက်စောစော၌ နေအိမ်ရှေ့သို့ ထွက်ပြီး ပစ္စည်းကောင်းလေးရထားတယ်ဟု ကျယ်လောင်စွာ ဟစ်ကြွေးလိုက်ပါ။
လက်ရှိနေရာမှ မြင့်မားသော အခြေအနေသို့ ရုတ်တရက် ရောက်ရှိတက်သည်။ ( ဥပမာ - ပွဲဈေး၌ ရဟတ်စီးခြင်း )။ လုံချည်အပြဲ အောက်နားစကို ထုံးချည်ပြီး ၀တ်တက်သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတစ်ဦး မိမိကို ကူညီမစရန် ကြွရောက်လာတတ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာသို့ တရားခံသွားပို့ရင်း မိမိပါ ရောပြီး ဆွဲထည့်ခြင်း ခံရတတ်သည်။ အတက်ပညာ အားဖြင့် အလွန်ကပ်စေးနည်သူထံမှ မရရအောင် ပိုက်ဆံချေးသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို အမှတ်မထင် စမ်းသပ်တွေ့ရှိရတက်သည်။ ပျိုရွယ်သူတို့ အချစ်ရေးကဏ္ဍ၌ သူတပါးထံမှ အ၀တ်အစားတို့ ငှားရမ်းဝတ်ဆင်ပြီး အထင်ကြီးအောင် နေပြတက်သူတစ်ဦးနှင့် ရည်ငံရတတ်သည်။ ကျန်းမာရေးအားဖြင့် ပါးစပ်ထဲမှ အခိုးအငွေ့ ထွက်လာသော ရောဂါဆန်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပွားခံစားရတက်သည်။
ယတြာ ။ ။ ညနေမှောင်ရီပျိုး၌ မျက်နှာကို အိုးမည်းသုတ်ပြီး ဘဏ်ရှေ့တွင် ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန် လမ်းသလာပြပါ။
အကြီးအကဲ၏ စောင်မမှုကြောင့် နောက်အိမ်ထောင်ပြုရတက်သည်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦး၏ အာသာငမ်းငမ်း အကူအညီ တောင်းခံမှုကြောင့် လျှိ့ဝှက်ပစ္စည်းတစ်ခု ထုတ်ပြရတက်သည်။ မိမိမရှိခိုက် လူစိမ်းတစ်ဦး ရောက်လာလေ့ရှိသည့် ကိစ္စအား စုံစမ်းဖော်ထုတ်ရတက်သည်။ လူပြက်သည့် နေရာ၌ အိပ်စက်နေစဉ် စမ်းသပ်ခံရ သဖြင့် လန့်နိးလာရတတ်သည်။ လူမှုရေးအရ ကူညီသောအားဖြင့် သေအံမူးမူး ဂန်ဒူးတစ်ယောက်၏ နောက်ဆုံးဆန္ဒကို ဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးရတတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူတို့ အချစ်ရေး၌ ၀ါးလုံးခေါင်းမြင်လျှင် လက်ညှိုးနှင့် ထိုးကြည့်ချင်သော အကျင့်ရှိသူတစ်ဦးနှင့် ချစ်ကြိုးသွယ်ရတက်သည်။ ကျန်းမာရေးပိုင်ဆိုင်ရာ အားဖြင့် နေရာမလပ်ဘဲ ၀ဲပေါက်သောကြောင့် အချိန်ပြည့် ကုတ်ဖဲ့နေရတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ အဆိုတော်ရင်ဂို၏ အချစ်နဲ့ပေါင်မုန့် သီချင်းကို သီဆိုရင်း ပေါင်မုန့်အလုံးရေ သက်စေ့စားလိုက်ပါ။
လုပ်ကိုင်သမျှ အရာထင်နေသည်ဖြစ်၍ စိတ်ညစ်နေရကိန်းရှိသည်။ ( ဥပမာ - အ၀တ်လျှော်ခြင်း ၊ အိုးခွက်ပန်းကန် တိုက်ခြင်း ) ။ သွေးအုပ်စုမတူသော သားသမီးမွေးဖွားခြင်းအတွက် တွေးစရာကိစ္စများ ဖြစ်ပေါ်နေမည်။ ကြွေးရှင်၏ ရှေ့မှောက်၌ ထီပေါက်သည့် အကြောင်းကြားစာကို လူမှားပြီး လက်ခံရတတ်သည်။ ဘေးအိမ်မှ အတွင်းခံအ၀တ်အစားတို့ ပျောက်ဆုံးမှု၌ သံသယ အ၀င်ခံရတတ်သည်။ အသုဘလိုက်ပို့ရင်း မီးသင်္ဂြိုဟ်စက်ထဲ ခုန်ဝင်လိုစိတ်များ တဖွားဖွား ဖြစ်ပေါ်နေတက်သည်။ အိမ်ထောင်ရှင်များအဖို့ အိမ်ထောင်ဖက်၏ နသိုးကြိုးပြတ် လှုပ်ရှားမှုများအပေါ် ရင်ဖိုနေရတက်သည်။ ကျန်းမာရေးအားဖြင့် အသားထဲမှ လောက်ထွက်သော ဝေဒနာ ဖြစ်ပွားခံရတတ်သည်။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့၌ ဆားတစ်ပိဿာ ရေဖျော်သောက်ပြီးနောက် အောင်ပြီ အောင်ပြီ ဟုကြွေးကြော်လိုက်ပါ။
နိင်ငံခြားရှိ ကမ္ဘာ့ငပေါကြီးများ အသင်းမှ ပေးအပ်သော ဂုဏ်ထူးဆောင် ဆုတံဆိပ်တစ်ခု လက်ခံရရှိတက်သည်။ ညဉ့်နက်သန်းခေါင်ယံ၌ တံခါးလာခေါက်သဖြင့် သရဲခြောက်သည်ထင်ပြီး ချောင်းကြည့်ရာ သရဲထက်ဆိုးသော ကြွေးရှင်ဖြစ်နေကြောင်း တွေ့မြင်ရတတ်သည်။ မိန်းမပျိုတစ်ဦးအနောက်မှ အာရုံးစူးစိုက်ပြီး လျှောက်လှမ်းမိသဖြင့် အဖုံးပွင့်နေသော ရေမြောင်းထဲ ပြုတ်ကျရတတ်သည်။ အတက်ပညာ ကဏ္ဍအားဖြင့် ရေသန့်ဘူးထဲ ဘုံဘိုင်ရေထည့်ပြီး ပါကင်ပိတ်၍ ရောင်းစားသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ကို အမှတ်မထင် လေ့လာရတတ်သည်။ ပျိုရွယ်သူတို့ အချစ်ရေး၌ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်ပြီး တစ်နေကုန် လေပန်းတတ်သူတစ်ဦးနှင့် ချစ်ကြိုး သွယ်ရတက်သည်။
ယတြာ ။ ။ မွေးနေ့တွင် ကြက်တူရွေးကို ဆန်ပြုတ်တိုက်ရင်း အလိုရှိရာ အာရုံပြုဆုတောင်းပါ။
ပျော်ရွှင်စေရန် အလို့ငှာ ရီစရာဟာသ မဂ္ဂဇင်းမှ ကောက်နုတ်ဖော်ပြပါသည်။
0 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:40 AM
“ လူတစ်ယောက်ဟာ နိင်ငံကို မချစ်ရင် အမျိုးကိုလည်း အထင်မကြီးတော့ဘူး ၊ ကိုယ့်ရဲ့ အမျိုးအနွယ်ကို
စောင့်ရှောက် သင့်တယ်ဆိုတာကိုလည်း သတိမရတော့ဘူး ၊ ဒီတော့ သူ့ရဲ့ မျိုးဆက်ဟာလဲ
ဘယ်စစ်နိင်တော့ မှာလဲ ၊ မျိုးဆက်ဆိုတာဟာ ပျက်ပြီဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့
တိမ်ကောပြီး ပျောက်သွားတတ်တယ် ”
( မစန္ဒာ )
6 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:40 AM
ရွှေမျက်မှန် ကိုလူချော ဗိုလ်အောင်ဒင် ၊ ဥပဒေနဲ့ လောင်းကစားတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် ဇာတ်လမ်း
ဆရာရွှေဒုန်းဘီအောင်ရဲ့ နှစ်ငါးဆယ်ခန့်က မော်ကွန်းဝင် ရုပ်ရှင်ကားတစ်ကား ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ခေတ်ဟောင်း မင်းသားချော ခင်မောင်ရင် သရုပ်ဆောင်ထားပြီး ဂီတစာဆို မောင်ကြေးမုံ ပြန်လည်ဆန်းသစ်ထားတဲ့ အကယ်ဒမီ စိုးရွှေ ၊ အကယ်ဒမီ တင်တင်နွဲ့ တို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် တိတ်ဇာတ်လမ်းလေးကို မြန်မာဘလော့ဂ်များ နားထောင်ဖူးကြပါလိမ့်မည်။ နားမထောင်ရသေးဘူး ဆိုရင်လည်း နားထောင်လိုက်နိင်အောင် ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးက ငယ်ငယ်ကတည်းကနေ အခုချိန်ထိ ကြိုက်နှစ်သက်ခဲ့ ရတာပါ။ ဘယ်တော့မှ မရိုးနိင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေ့ါ။ ဒီဇာတ်လမ်းလေးမှာ သူရုပ်ဆောင် ထားကြသူတွေကတော့.....
“ ဖားတုလို့ ခရုခုန် အိုက်ပျက်ရုံပဲ ရှိမယ် ၊ ခက်တဲ့ကောင်တွေပဲကွာ ၊ လောကကြီးမှာ အလုပ်လုပ်စားရတာ တယ်ကြပ်ပါလား ”
“ လွယ်သလား ခက်သလား ရာမ ၊ ရာမ...လွယ်သလား ခက်သလား ပြောစမ်း င့ါကို ၊ ဟေ့...ဒီမှာ ဗိုလ်လုပ်ချင်တဲ့ ကောင်ဆိုတာ ဒီလို ပစ်နိင်မှ့ ဗိုလ်လုပ်လို့ရတာကွ ”
ဆိုတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင်အဖြစ် ကော်လိပ်ဂျင်နေ၀င်း
“ ၀မ်းနည်းပါတယ် ဦးအောင်ဒင် ၊ I`m verry sorry ဂတ်တဲရောက်မှ ကြည့်ရှင်းကြတာပေ့ါဗျာ ၊ duty is duty ပေ့ါ ”
ဆိုတဲ့ ကိုကိုချစ်အဖြစ် စိုးရွှေ
“ သူပြောတဲ့ အတိုင်း မဖြစ်နိင်ဘူးလား ဟင်....ကိုကိုချစ် ၊ ပြန်ပေးလိုက်ပါနော် ”
ဆိုတဲ့ မမြ၀င်းအဖြစ် တင်တင်နွဲ့
“ လုပ်စမ်းပါ ဆရာရဲ့ ၊ ချစမ်းပါ ”
ဆိုတဲ့ ဗိုလ်အောင်ဒင် တပည့် သုခ
တိုရဲ့ အသံနဲ့ သရုပ်ဆောင်ပုံများကို နားထောင်ရအောင် ပြန်လည်ဝေမျှလိုက်ပါတယ်...
ပျော်ရွှင်သော ရုံးပိတ်ရက်များကို ပိုင်ဆိုင်နိင်ကြပါစေ။
4 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:09 PM
သူငယ်ချင်း ( ၁ ) - “ ငါ သူ့ကို....လမ်းခွဲ ချင်နေပြီဟာ ”
“ သူက တစ်ကိုယ်ကောင်း ဆန်တယ် ၊ မြာပွေတယ် ၊ ပြီးတော့ ရမ်းကားတက်တဲ့ အကျင့်လည်း ရှိတယ်ဟ ”
သူငယ်ချင်း ( ၂ ) - “ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်လည်း ”
သူငယ်ချင်း ( ၁ ) - “ နင်က ငါ့သူငယ်ချင်းဆိုတော့ ငါတိုင်ပင်တာပါ....ငါကို ၀ိုင်းစဉ်စားပေးပါဟာ နော် ”
သူငယ်ချင်း ( ၂ ) - “ ဟုတ်ပြီ...ဒီလောက်တောင် ဖြစ်နေရင် ဒီလို ယောင်္ကျားမျိုး တသက်လုံး မပေါင်းနဲ့ ၊ ဖြတ်ပစ်လိုက် ၊ ငါလည်း သဘောမတူဘူး ”
တလလောက်နေတော့...... ( ကွယ်ရာ ကနေ )
ကိုကို..... “ ကိုကိုနဲ့ ရန်ဖြစ်တုန်းက ဖြတ်ဖို့ပြောတာ သူပေ့ါ ”
ခင်ဗျား ဒါမျိူး ဖြစ်ဖူးသလား ။ သူငယ်ချင်း ရည်စား နှစ်ယောက် လမ်းခွဲကြတော့မယ်။ တစ်ယောက်ယောက်က ခင်ဗျားဆီက အကြံဥာဏ်တောင်း ကြတယ်။ ဒါကို ခင်ဗျားကလည်း စိတ်ထဲ ရှိတဲ့ အတိုင်း ပြောလိုက်တယ်။ အမှန်က ခင်ဗျားက သူတို့ကို ကူညီဖို့ ကြိုးစားပေးတာပါ။ နောက် ၁ ပတ် ၊ ၁ လ လောက်မှာ သူတို့ ပြန်တည့်နေကြပြီး နှစ်ယောက်စလုံးက ခင်ဗျားကို မုန်းသွားနိင်ကြဖို့ ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
“ ဆက်ဆံရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ သူငယ်ချင်းတွေကို အကြံပေးတဲ့ အခါ သတိထားပါ ၊ မိုင်းကွင်းထဲ လမ်းလျှောက်သလို နင်းမိတာနဲ့ ပေါက်ကွဲတက်ပါတယ် ”
5 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 6:00 PM
ရန်ကုန်တိုင်း အနောက်ပိုင်းခရိုင် ကြည့်မြင်တိုင်မြို့နယ်မှာ တည်ရှိတဲ့ “ ဗဟိုစံပြ ငါးဈေးကြီး ” ဆိုတာ နာဂစ် မဖြစ်ခင်တုန်းကတော့ သိချင်မှ သိကြပါလိ့မ်မယ်။ ဧရာဝတီတိုင်း အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က ငါးမျိုးစုံကို မော်တော်အသေးစား ၊ စက်လှေ ၊ ငှက် မျိုးစုံနဲ့ လာသွင်းပြီး မြန်မာနိင်ငံ အရပ်ရပ်ကို ဖြန့်ဖြုးတဲ့ နေရာတစ်ခုပေ့ါ။ မအူပင် ၊ ညောင်တုန်း ၊ ၀ါးခယ်မ ၊ ကျုံပျော် ၊ ငါးသိုင်းချောင်း စတဲ့ အရပ်ဒေသ မျိုးစုံက လာပို့ကြတာပါ။ လှိုင်မြစ်ကမ်း ပေါ်မှာ တည်ရှိပြီးတော့ မြန်မာနိင်ငံရဲ့ အဓိက ကျတဲ့ စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းပေးတဲ့ နေရာကြီးပါ။
လူရွှင်တော် အရိုင်းပြောတာလေး တစ်ခုရှိပါတယ်......
“ ဗဟိုစံပြ ငါးဈေးကြီးဆိုတဲ့ အတိုင်း အထဲမှာကလည်း ငါးဈေးတွေက တကယ်ကြီးတာကိုးဗျ ” တဲ့။
အဲဒီနေရာလေးက ၂၄ နာရီ ငါးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူတွေနဲ့ အမြဲတမ်းအသက်ဝင်နေတဲ့ နေရာလေး။ ညဖက် စားသောက်ဆိုင်တွေလည်း ရှိတယ်။ ကြီးကြီးမားမားတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒီက အလုပ်သမားတွေ ဗိုက်ဆာရင် အဆင်ပြေအောင်ရယ် ရောင်းလည်း ရောင်းရတာကြောင့် လမ်းဘေးဆိုင်မျိုးလေးတွေ ဖွင့်ထားကြတာပါ။ နှစ်ဦး နှစ်ဖက်လည်း အဆင်ပြေကြပါတယ်။ ထန်းတပင် ၊ လှိုင်သာယာ လောက်က သီရိမင်္ဂလာဈေးကို သွားလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဒီဈေးကြီးကိုပဲ လာလာ လိုင်းကားမှန်သမျှက ကမ်းနားလမ်းကနေ ဖြက်မောင်းရတာကြောင့် နေ့ညမပြက် အသက်ဝင်နေပါတယ်။ ခရီဝေးက လာရတော့ သူတို့က ကားအစောကြီး ထစီးရတာ ကြောင့်လည်း လူမပြက် ဖြစ်နေတာပါ။
ဈေးထဲကို ၀င်သွားမယ် ဆိုရင် ဘောလုံးသမားတပိုင်း ၊ မြိုင်ရာဇာတွက်ပီ တပိုင်း လူကြီး လူငယ် မျိုးစုံကို တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ အဲဒီရှိသမျှ ငါးဒိုင်တွေမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လူအားလုံးဟာ အပေါ်ပိုင်းက ဘောလုံးအကျီဈေးပေါပေါကို အပေါ်အောက် ၀တ်ဆင်ပြီး အောက်ကတော့ တောဘွတ်လို့ ခေါ်တဲ့ ကြက်ပေါင်လည်ရှည် ဖိနပ်ကို အမြဲဝတ်ဆင်ထားကြပါတယ်။ ဒီလိုဝတ်မှလည်း သူတို့လို အညှီအနံတွေ လုပ်တဲ့ သူအတွက် လုပ်ရကိုင်ရာ သက်သာတာ မဟုတ်လား။ တစ်ချို့တလေကျတော့ ဘက်စကတ်ဘောသမား တွေလို တမျိုး ၊ စွပ်ကျယ် တွေဝတ်ထားတက်ကြပါတယ်။
၀တ်ပုံစားပုံကတော့ အလုပ်သဘောအရ ၀တ်ဆင်ရပေမယ့် အထင်တော့ မသေးလိုက်ပါနဲ့။ ငါးဒိုင်မှာ လုပ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် နေ့စဉ် စားဝတ်နေရေးအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ သာမာန်ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ငါးတစ်ကောင်နဲ့တင် ဟင်းစားဖြစ်တာကိုး။ လစာအရ လုပ်ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပုတ်ပြက်သဘောမျိုးပါပဲ။ လစာအရတော့ တစ်ချို့တလေ ရှိပါတယ်။ တစ်ချို့ဆို လုပ်မဲ့သာ လုပ်နေကြတာ လက်ထဲမှာ လည်ပင်းမှာ လက်စွပ် ၊ ဆွဲကြိုးနဲ့။
ဒါ့အပြင် လမ်းဘေးငါးဈေးသည် တွေလည်း ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတော့ စောနကလို အလုပ်သမားတွေက ငါးဒိုင်တွေက ရလာတက်တဲ့ ငါးတွေ ပုဇွန်တွေကို တန်းဖိုးနည်းနည်းနဲ့ ပြန်ဝယ်ပြီး လမ်းမှာ ချရောင်းကြတာပါ။ တခါတလေ သူတို့နဲ့ အတူပါလာတဲ့ ကလေးတွေကလည်း မျောက်ရှုံးအောင် ဆော့တက်ကြသလို ကမ်းနားက ငါးရှဉ့်တွေ လိုက်နှိုက်နေတာကို တွေ့ရမှာပါ။
ညဆိုရင်တော်တော်လေး ဆိတ်ငြိမ်အေးချမ်းပါတယ်။ လှိုင်းခက်သံ ၊ လေတိုက်သံလေးတွေနဲ့ တဖက်ကမ်းက မီးရောင်မှိန်မှိန်လေးတွေကိုငေး ၊ မြစ်ပေါ်က ရပ်ထားတဲ့ ပင်လယ်ကူး သင်္ဘောကြီးတွေက မီးရောင်တွေကို ငေးရင်းနဲ့ ညခင်းအလှကတော့ ကြည်နှုးဖို့ကောင်းပါတယ်။ ခွင့်ပြန်လာတိုင်းလည်း အဲဒီနေရာလေးကို အချိန်ပေးပြီး သွားထိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့တွေရဲ့ ဘ၀နဲ့ လုပ်ငန်းအကြောင်းကို သိချင်တာရယ်နဲ့ သဘာဝအလှကို ခံစားကြည့်ချင်လို့ပါ။ တလောက နာဂစ်ဖြစ်သွားတုန်းက ကျွန်တော်သွားထိုင်တက်တဲ့ ဘောတံတားကြီးတောင် ပက်လက်ကြီးကို ဖြစ်လို့။
သတိရလို့ ရေးကြည့်လိုက်တာပါ။ ရန်ကုန်ကို ရောက်လာတဲ့ နယ်က ဘလောဂ့်ဂါတွေ ရောက်လာရင် လိုက်ပို့မယ်ဗျာ။ ပျော်ရွှင်သော ရက်သတ္တပတ် ဖြစ်ကြပါစေ။
Google Earth ကနေကြည့်ရင် ဒီလိုမြင်ရပါလိမ့်မယ်
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 9:59 PM
အားနည်းချက် ရှိတဲ့ လူတွေနဲ့ ပက်သက်လို့ ခင်ဗျား သတိထားမိတာ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါဘာလည်းဆိုတော့ သူတို့က စိတ်ပျက် အားလျှော့တဲ့ စကားမျိုးပဲ ပြောတက်ကြတယ်။ နောက်ပြီး “ ကြိုးစားကြည့်မယ်လေ ” ဆိုတဲ့ စကားမျိုးကို သူတို့ အသုံးများကြတယ်။ ဥပမာ အားဖြင့် -
“ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဖို့ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်မယ်လေ ”
“ ဒီလတော့ အကြွေးကင်းအောင် ကြိုးစားရမယ် ”
“ ကျွန်တော် ကြိုးစားကြည့်မယ် ”
ဆိုတဲ့ စကားမျိုး ပြောတဲ့လူကို တွေ့ရင် သူတို့ဟာ ထက်ဝက်လောက်ပဲ အလေးအနက်ထားနိင်တာကို သိနိင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတွေက “ အဲဒီကို ကျွန်တော် ကြိုးစားပြီး လာခဲ့မယ် ” လို့ပြောရင် သူတို့ ပေါ်မလာတော့ဘူးဆိုတာ သိလိုက်ရပြီ။
တွေးခေါ်ကြည့် စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ စကားလုံးတွေက ကျွန်ုပ်တို့ သန္နိဋ္ဌာန်ဘယ်လောက် ခိုင်မာသလဲဆိုတာ ဖော်ပြနေပါတယ်။ “ ကြိုးစားပြီး ငြိမ်ငြိမ်လေးနေကြ ” ၊ “ ကြိုးစားပြီး ကောင်းအောင်နေကြ ” လို့ သားသမီးတွေကို ပြောတဲ့ မိဘတွေဟာ အလေးအနက် သိပ်မရှိကြပါဘူး။ ဒီတော့ ကလေးတွေက သူတို့လုပ်ချင်တာကို လုပ်သွားတက်ကြပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့ ကလေးတွေ ဒါမှမဟုတ် ၀န်ထမ်းတွေကို “ မင်းတို့ ကြိုးစားလုပ်ရမယ် ” လို့ပြောမယ့်အစား “ မင်းတို့ လုပ်ကို လုပ်ရမယ် ” လို့ပြောပါ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း “ ငါကြိုးစားမယ် ” လို့ပြောမယ့်အစား “ ငါလုပ်မယ် ” လို့ပြောပါ။
ဒါဟာ စိန်ခေါ်မှု ဖြစ်ပါတယ်။ ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်တွေ ရလာပါလိမ့်မယ်။ “ ဒါကို ပြီးအောင် လုပ်မယ် ” ၊ “ ငါပျော်ရွှင်ရမယ် ” လို့ပဲ တွေးပါ ။ ဒီစကား နှစ်ခုဟာ ဘာကို ကွားခြားစေသလဲဆိုတော့
“ ငါကြိုးစားကြည့်မယ် ” လို့ပြောတာက “ သိပ်မခက်ရင်တော့ လုပ်မယ် ” ဆိုတဲ့ သဘောကို ဆောင်ပြီးတော့ “ ငါလုပ်မယ် ” လို့ပြောတာက “ ဘယ်လောက်ပဲ ခက်ခက် ငါလုပ်မယ် ” ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဆောင်ပါတယ်။ ဒါဟာ လုပ်မယ့် ကိစ္စကို အလေးအနက်ထားတာပါ။
ပေါ့ပျက်ပျက် ပြောတာနဲ့ အလေးအနက်ထား ပြောတာ ကွာခြားချက်ရှိသလို ဒီစကား နှစ်လုံးရဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေက အောင်မြင်မှုနဲ့ ဆုံးရှုံးမှုရဲ့ ကွဲပြားခြားနားမှု ဖြစ်ပါတယ်။ လူတွေက သင့်အပေါ် ယုံကြည်မှု ရှိလာစေချင်တယ် ၊ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှု ရှိလာစေချင်တယ် ဆိုရင် သင်ပြောတဲ့ စကား လေးနက်မှု ရှိပါစေ။
“ သင်ပြောတဲ့ စကားက သင့်အနာဂတ်ကို ပုံဖော်ပါတယ် ”
12 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:22 PM
ရောက်ရှိလို့ လာပါတော့တယ်။ ရမ်ဘိုလို ကာဘိုင်သေနတ်ကိုကိုင် ၊ နဖူးမှာ အ၀တ်နီကြီးစည်း ၊ ကိုယ်ပေါ်မှာလည်း ကျည်ဆံတွေ အတွဲလိုက် ၊ အံကြီးကြိတ်ပြီး ချွေးတွေ သွေးတွေနဲ့ မျက်လုံးကြီး ပြူးပြီးကြည့်နေလိုက်တာ သူ့ဘေးမှာလည်း မင်းသမီးက မြေပေါ်မှာ ဖရိုဖရဲနဲ့ အနောက်က ဂျပန်တွေက အုပ်စုလိုက်ကြီး လိုက်နေတဲ့ ပိုစတာကြီးကိုလည်း တွေ့ရော “ ဟ....မောင်ဆိုးသွမ်းတို့ သိပ်စိတ်ဝင်စားသွားတာပေ့ါ ” ။ ဒါနဲ့ ဘယ်အချိန်ပြမှာလဲ ဆိုတာသွားကြည့်ရင်း သူငယ်ချင်းကိုပါ အဖော်စပ်လိုက်တယ်။ ဒီကောင်ကလည်း လာထားပဲ။ ဘောကန်လည်း အတူတူ ၊ အရုပ်ပစ်လည်း အတူတူ ၊ ဂေါ်လီရိုက်လည်း အတူတူ ဆိုတော့ ချန်ထားခဲ့လို့ မရဘူး။
လာပါပြီ....စပြီဆိုတာနဲ့တင် ကိုသီဟတင်စိုးကြီးက “ ငါတို့ မျိုးချစ်တပ်သားတွေဟာ ကျူးကျော်လာတဲ့ နယ်ချဲ့ ဖက်ဆစ်တွေကို...ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် နဲ့ စလိုက်တာ ဆိုးသွမ်းတို့လည်း ကြည့်တာပေ့ါ။ ကျူးကျော်လာတဲ့ ဖက်ဆစ်တွေကို လူလေး ၅ ယောက် ၆ ယောက်လောက်နဲ့ ဟိုက တပ်ခွဲတစ်ခွဲလောက် ရှိတာကို အတင်းတိုက် ၊ ဒိုင်းနမိုက်နဲ့ ပစ် အားလားလား သီဟကြီးကွ ။ မနိင်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး။ နောက်ဆုံး ဘယ်သူမှ မကျန်ရင်တောင် သူကျန်ခဲ့မှာ သိနေတော့ အပြက်အားပေး လိုက်တယ်။ စရိုက်လေးက အဲဒီကတည်းက ပစ်ချင်ခက်ချင်နေတာ။ ဗုံးကို ခွဲလိုက်ရင် ကားခနဲ့ မြှောက်သွားတဲ့ နယ်ချဲ့ဖက်ဆစ်တွေ ကြည့်ပြီး “ သေစမ်း ၊ ရွာသားတွေ နှိပ်စက်တဲ့ကောင် ၊ မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ကောင် ၊ ရွာကို ဖျက်ဆီးတဲ့ကောင် ” စသည်ဖြင့် စိတ်ထဲက ကြုံးဝါးပြီး သူတို့သေတာကို ၀မ်းသာနေခဲ့တာ။
နောက်ဆို ဘယ်ကားမှ မကြည့်တော့ဘဲ သီဟတင်စိုးမှ သီဟတင်စိုး။ နောက်ဆုံး မှတ်မိတဲ့ တစ်ကားဆို ဖက်ဆစ်တွေနဲ့ နောက်ဆုံးခန်းမှာ သီဟတင်စိုးနဲ့ နောက်တစ်ယောက်ပဲ ကျန်တော့တာ။ အဲဒီအချိန် နယ်ချဲ့တပ်ကြီးကလည်း ချီလာပြီ။ စစ်ကူကလည်း မလာသေး။ ဒီတခါတော့ ငါ့တို့ကောင်ကြီး ဂိန်ပြီနဲ့ တူပါတယ်ကွာ ဆိုပြီး ၀မ်းနည်းနေတာ။ အမယ် ဒါရိုက်တာက ဘယ်လက်ခံမလဲ ။ သီဟတင်စိုးက စစ်သီချင်းထဆိုတာ ဘာတဲ့ “ ရင်ဆိုင်မယ်လေ ရင်ဆိုင်မယ်လေ....ရေဆန်အတူ ဖြက်မယ် ဆိုတဲ့မင်း ” မှားလို့ ဒါက အငဲဆိုတာ။ :P မမှတ်မိတော့ပါဘူး ဘာသီချင်းမှန်း။ ဒါပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်က အားနဲ့မာန်နဲ့ အကျယ်ကြီး အော်ဆိုလိုက်တာကြောင့် ဖက်ဆစ်တပ်တွေက တော်လှန်ရေးသမားတွေ အများကြီး ရှိတယ်ထင်ပြီး နေရာယူနေတာ။ မတိုက်ရဲတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ကိုသီဟတို့လည်း စစ်ကူတွေ လာဖို့ အချိန်ရသွားပါတော့တယ်။ အဲဒီအခန်းလေးကို စိတ်ထဲမှာ အခုထိ မြင်ယောင်နေတုန်းပါပဲ။
ဒါက ကလေးဘ၀က ဖြစ်ရပ်လေးတွေပါ။ ၁၀ တန်းတွေ ဘာတွေရောက်လာတော့ ဒွေးတို့ ၊ ရဲအောင် တို့ အပြိုင်အဆိုင်ပေါ်လာတော့ ဒွေးကို အားပေးတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ရွှေဘက ရွှေဘပဲ ဆိုသလို့ ကိုသီဟကားတွေကို ငှားပြီး ကြည့်မိပါတယ်။ မြန်မာနိင်ငံ လွတ်လပ်ရေး ရတာ ၁၉၄၈ က ဆိုပေမယ့် ကိုသီဟတင်စိုးကြီးကတော့ အခုထိ တော်လှန်နေတုန်းပါပဲ။ ဒါကလည်း သူ့စတိုင်ပေ့ါလေ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းက တိုင်းတပါးသားကို မုန်းတဲ့ စိတ် ကျွန်တော့်မှာ ရှိနေခဲ့တာပါ။ အသားလွတ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ကျူးကျော်လာတဲ့ သူတွေကိုပေ့ါ။
ဒါဟာလည်း စိတ်ထဲမှာ ခဏတာနဲ့ပဲ ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေပြီး ၁၀ တန်းအောင်ရင် တက္ကသိုလ်တက်မယ်ပေ့ါ။ ဒွေးက အဲဒီအချိန် ကင်းကောင် ၊ ပိုးဖြူ ၊ ငှက်ပျော်ကြော် ၊ တို့နဲ့ တက္ကသိုလ်ဟာသ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွေ ရိုက်နေတော့ ဒါလားပေ့ါ တက္ကသိုလ်။ အိုကေ...ကြိုက်တယ်။ ကောင်မလေးတွေကို ဘယ်လို ကြောင်မယ် ၊ ဘယ်လိုဟာသ လုပ်မယ် ၊ ကျောင်းကလုပ်တဲ့ ဘောလုံးပွဲမှာ ဘယ်လို ခြေစွမ်းပြမယ် ဘာညာနဲ့ ၁၆ နှစ်သားဘ၀ စိတ်ကူးယဉ် ဖဲရိုက်နေတာပေ့ါ။ ဒါပေမယ့် ကိုသီဟကြီး ဗီဒီယိုကားတွေတော့ ကြည့်ဖြစ်နေတုန်း။
လာထား ဆိုးသွမ်းတို့ ၁၀ တန်းအောင်ပြီ။ အမှတ်စာရင်းထုတ် - ၅ ဘာသာ ရမှတ် ၃၂၀ နဲ့ ။ အမယ် မဆိုးဘူးဟ။ ရေကြောင်းသိပံ္ပ ၊ ဂျီတီအိုင် ၊ ဘာညာ လျှောက်မယ်။ အခုလောလောဆယ်တော့ ဟုတ်သော်ရှိ မဟုတ်သော်ရှိ ။ စပီကင် သွားတက်လိုက်မယ်ဆိုပြီး တောင်လုပ်မြောက်လုပ်နဲ့ ။
နောက်တော့ အိမ်ကိုလာနေတဲ့ အဒေါ်က သူ့သားတက်နေတဲ့ စစ်တက္ကသိုလ် ကိုတက်ခိုင်းလိုက်တာပါပဲ။ သေနတ်တွေ ဗုံးတွေ ပစ်ရတာ လက်ညိုးလေး ကွေးတက်တာနဲ့တော့ ပစ်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နားတော့ တော်တော်အူပါတယ်။ အော်...ကိုသီဟ ကိုသီဟ။ ခင်ဗျားကတော့ ပစ်လိုက်တာ ကြဲလိုက်တာ။ တကယ်လုပ်ကြည့်မှ မလွယ်ဘူးဗျ။ ကျောင်းတက်တုန်းက ပထမဆုံး ဗုံးပစ်သင်ခန်းစာ ၀င်တော့ ဗုံးတွေ မြင်ပြီး ဒူးတုန်သလိုလို ၊ အပေ့ါသွားချင် သလိုလိုနဲ့။ တကယ်လည်း ပစ်ရော ။ သူတို့သင်ပေးထားသလို လုပ်လိုက်တော့လည်း လွယ်ပါတယ်။ “ ရော့ကိုင်ထား ။ ကလစ်ကို မလွတ်နဲ့ ။ ပင်ဖြုတ် ။ ပစ် ၊ ၀ပ် ၊ အုန်း ။ ဒါပဲ။ မြန်လိုက်တဲ့ ပစ်ချက်။ ဟဟ။ ”
အဲဒါနဲ့ပဲ သီဟတင်စိုး ရိုက်ပြခဲ့တဲ့ နယ်ချဲ့တွေကို တော်လှန်တာတွေ ကြည့်ပြီး စစ်ထဲ ရောက်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော် ။ တိုက်ပွဲ မတိုက်ဘူးခဲ့ပေမယ့် တောစီးဖိနပ် ၊ ကျောပိုးအိတ် နဲ့ အီကွစ်မန့်ကို ၀တ်ကာ သေနတ်ကိုင်ရင်း ရှေ့တန်း ထွက်ခဲ့ဖူးပါသည်။ လည်ပင်းမှာ အနီပတ်စည်းလိုက်တာနဲ့ တက်ကြွနေခဲ့သည်။ ကျွန်တော် ထွက်ခဲ့ရာ ရှေ့တန်းဒေသ တစ်လျှောက် အယဉ်ကျေးဆုံး ၊ စေတနာ ထား၍ ဆက်ဆံခဲ့သည်။ မတရားတာလည်း ဘာမှ မလုပ်ခဲ့။ ထမင်းငတ်လျှင် သစ်ခုတ်ပြီး ရောင်းစားသည်။ ရဲဘော်တွေကို ထမ်းခိုင်း ၊ကိုယ်က လက်ပိုက်ကြည့်နေခဲ့တာ မဟုတ် ၊ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် လွှဝင်ဆွဲသည်။ ချောက်ထဲက သစ်တုံးကို ဆရာကြီးတွေနဲ့ အတူတူ ထမ်းတက်ခဲ့သည်။ လူကြုံရှိလျှင် အိမ်က ပိုက်ဆံမှာသည်။ လူလေး ၆ ယောက်လောက် ရှိသည့် စခန်းမှာ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကင်းစောင့်ဖူးသည်။ ထမင်းချက်တက်သည့် ဆရာကြီးမရှိလို့ ထမင်းငတ်နေတဲ့ သူတွေကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ထမင်းချက်ကျွေးခဲ့ဖူးသည်။ ကျွန်တော့်အကြောင်း ကောင်းကြောင်း တွေပြောနေသည်ဟု ထင်နေလျှင်တော့ တောင်းပန်ပါသည်။ ဒါစစ်သားဘ၀မှာ ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာတွေ အမှန်အတိုင်း ပြောပြချင်းဖြစ်ပါသည်။
နိင်ငံရေးကို ၀င်မပြောလို ၊ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်နိင်ငံ ကိုယ့်လူမျိုး ကောင်းစားနေတာ ကျွန်တော်လိုလားပါသည်။ ကိုယ့်လူမျိုး ဒုက္ခရောက်တာ ကျွန်တော် မကြည့်ရက်။ ဘယ်လိုအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အနှိမ်ခံနေရတဲ့ ၊ ပြဿာနာတွေ တန်းစီတက်နေတဲ့ နိင်ငံရပ်ခြားက ကျွန်တော့်သွေးရင်း ၊ မြန်မာတွေ အကြောင်းကို ဖတ်ရတိုင်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ ကောင်းပြီ.....စိတ်မကောင်းရင် မင်းရော ဘာလုပ်နိင်သလဲ မင်းလုပ်နိင်တာ လုပ်ပေးလိုက် စေတနာပါပါစေ လို့ ကျွန်တော့်ကို ကျွန်တော် ဆုံးမသည်။ စာဖတ်သူလည်း ကိုယ်တက်နိင်တာ ကိုယ်လုပ်ပေးစေချင်ပါသည်။
“ စကားတခွန်းပြောနေမှာထက် ပြန့်ကျဲနေတဲ့ အမှိုက်တွေကို တချက်လောက် လှဲလိုက်ပါ ”
လို့ပဲ ကျွန်တော် ပြောပြချင်ပါသည်။ သီဟတင်စိုး ရိုက်ခဲ့တဲ့ တော်လှန်ရေး ကားတွေကြောင့် နယ်ချဲ့တွေ ကျူးကျော်မှာကို တွန်းလှန်ချင်တာနဲ့ပဲ ကျွန်တော်စစ်တပ်ထဲ ရောက်လာခဲ့ရသည်။ အာဏာမလို ၊ အသပြာကြောင့်မဟုတ်ခဲ့ ။ အဲဒီလို လူတွေ ရှိနေပါလိ့မ်မည်။ သို့သော် သူတို့လည်း ကျွန်တော်တို့ နည်းတူ အဆဲခံ ၊ အစွပ်စွဲ ခံနေရပါဦးမည်။ ဒါတွေ ကျွန်တော် မခံစားခဲ့ပါ။ စာဖတ်သူရဲ့ လက်တဖက်ကိုပဲ ကျွန်တော်လိုချင်ပါသည်။
ကဲ....ရော့ ။ ဒါက ကျွန်တော် ကမ်းတဲ့ လက်တဖက်ပါ။
ကျွန်တော် ရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:02 PM
အဲဒီတုန်းက ကျွန်တော့်အသက် ၄ နှစ်။ အရေးအခင်းဆိုတာ ဘာမှန်းလည်းမသိလိုက်ဘူး။ ၀ိုးတိုးဝါးတားနဲ့ “ အိမ်ထဲမှာ နေကြ အိမ်ထဲက အပြင်မထွက်နဲ့ ” ဆိုတဲ့ ဦးလေးအကြီးဆုံး ၊ အဖေအမေ အစ်ကိုတွေ အမတွေရဲ့ စကားသံကိုပဲ ကြားနေရတယ်။ တခါတခါ ဂိုဒေါင်ဖောက်တယ် ဆိုတာကြားရတယ်။ ဦးလေးယူလာတဲ့ ချည်ထည် အကြမ်းထည် တွေကို မောင်နှမတွေ ဘောင်းဘီချုပ်ဝတ်ဖို့ အမေက လုပ်ပေးတယ်။ ပျော်လိုက်တာဗျာ။ အ၀တ်အသစ်တွေ ၀တ်ရတာကိုး။ ကျွန်တော်တို့ နေတာက စမ်းချောင်း ( အရင် ဂျီဘီအို ၂ ) လမ်းလို့ ခေါ်တာပေ့ါ။ ကြံတော သုဿန်ကြီးနဲ့ ကပ်လျက်လေ။ ကားလမ်းပဲ ခြားတယ်။ ညညဆို အဲဒီ သုဿန်ထဲက ညမွှေးပန်း အပင်ကြီးက မွှေးလိုက်တာ တစ်ရပ်ကွက်လုံး ခေါင်းတောင် မူးရတယ်။ နောက်ပြီး အဲဒီအပင်ကြီးက တပင်တည်း ထီးထီးကြီးရယ်။ ညညဆို လမ်းပေါ်ကကြည့်ရင် မြင်နေရတာပေ့ါဗျာ။
ဒီလိုနဲ့ အရေးအခင်းပြီးသွားတော့ ကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်တော့ ကျောင်းပြန်တက်ရတော့တာပေ့ါ။ စာဖတ်သူတို့ မသိသေးတဲ့ ကျွန်တော့်လျို့ဝှက်ချက်ကြီးကို ပြောပြမယ်။ စစ်တပ်ထဲ ဘာလို့ ရောက်လာတာလဲ မမေးနဲ့ ။ ပထမဦးဆုံးကတော့ သီဟတင်စိုး လုပ်လို့ စစ်ထဲ ၀င်ခဲ့တာပါ။ အမြင်မှာတော့ ရယ်စရာကြီး ပေ့ါဗျာ။ ဒါပေမယ့် နောက်ကြောင်းဆိုတာ ရှိတယ်လေ။ အရေးအခင်းဖြစ်ပြီး စစ်တပ်အကြောင်း ကျွန်တော် ဘာမှ မသိပါဘူး။ အရွယ်က ကလေးကိုး ။ အမေပေးတဲ့ ထမင်းချိုင့်နဲ့ စားမယ်။ ကျောင်းက ရေအိုးစင်ထဲက ရေသောက်မယ်။ ပြန်လာရင် ဆော့မယ်။ ညကျရင် အိပ်မယ်။ ဒါပဲ ရှိပါတယ်။
ပြဿာနာက အဲဒီမှာ စတာ။ ကျွန်တော် ၄ တန်းလောက် ရောက်လာတော့ ဗီဒီယိုတွေ ခေတ်စားလာခြင်းပါ။ တီဗွီဆိုတာက အဲဒီတုန်းက ပိုက်ဆံရှိ လူလတ်တန်းစားလောက်မှ စသုံးဖို့ ကြံစည်ကြတာ မဟုတ်လား။ ( နိင်ငံခြားမှာတော့ ကွန်ပျူတာ ကို အဲဒီအချိန် ကောင်းကောင်း သုံးနေလောက်ပြီ ထင်တယ် ) ဒါနဲ့ ညဆိုတော့ ပျင်းတာပေ့ါ။ ကလေးသဘာဝ တူတူပုန်းတမ်း ကစားဖို့က မဖြစ် ( ဘာတဲ့ နတ်ဖွပ်တယ်ဆိုလား ) ကြောက်ကလည်း ကြောက်သေးတယ်။ အဖေပေးတဲ့ မုန့်ဖိုး ( ၂ ) ကျပ်ကို မောင်နှမတွေ အတူတူ ဓါးပြ တိုက်တောင်းရင်း ၄ အိမ်ကျော်က ဗီဒီယို ရုံကို ပြေးပါရောလား။ အဲဒီတုန်းက ရာဇ၀င်ကားတွေ ပြနေတဲ့ အချိန်ပေ့ါ။
ဟဟ ။ ဆိုးသွမ်းတို့ အကြိုက်ကတော့ ထွန်းလုံရှိန် ပဲ။ နန်းဝတ်နန်းစားနဲ့ ဖိုက်လိုက်တာလဲ သူ့ကို မနိင်ဘူး။ ဒါမျိုးမှ ကြည့်တာ။ အခုထိ ( သူရဲကားဆို - မှော်ဆရာ မပါရင် မကြည့်ဘူး။ သူရဲကို မနိင်ရင် မကြိုက်လို့ ) ။ တခါ ဘယ်သူ့ဘလော့ဂ်လည်း မသိဘူး။ တင်ထားတာက
“ တိုက်တန်းနစ်မှာ လီယိုနာဒိုကို ဘာလို့ မင်းသားတင်ရိုက်သလဲတဲ့ ”
“ စတီဗင်ဆေးလ်ဂဲကို တင်ရိုက်ရင် အားလုံးကို သူကယ်လိုက်မှာပေ့ါ ” တဲ့
ဟဲဟဲ။ အဲဒီလို ဖြစ်နေပြီ။ ဒါတောင် မကြည့်လိုက်ရတဲ့ ရွှေဘကားတွေ ကြည့်ချင်နေတာ။ ကလေးပီပီပေ့ါဗျာ ရုပ်တိရှိတာတွေ မရှိတာတွေ မစဉ်းစားနိင်ဘူး။ မင်းသားထိုးလိုက်လို့ နိင်နေရင် လက်ခုပ်တီးဖို့ က အသင့်ပေ့ါ။ အဲဒီမှာ စပြီး ဗီဒီယို စပြီး စွဲလန်းမိတာ။ ဗျာ...အော် ဟုတ်ကဲ့။ ဖြေးဖြေးပေ့ါဗျာ။ ပြောမှာပေ့ါ။ ခဏလေး စိတ်ရှည်ပါဦး။ ဒါနဲ့ ညနေတိုင်း ညနေတိုင်း ကစားပြီးတာနဲ့ ဗီဒီယို ရုံတန်းသွားတော့တာပဲ။ တဖက်တလမ်းကလည်း အားကျမခံ ကာတွန်းဖတ်တယ် ၊ တီဗီဂိမ်းနှိပ်တယ်။ အဲဒီလို ကလေးဘ၀ကတည်းက အလုပ်များတာ။ ပြန်လာပြီဆို ဗီဒီယိုရုံမှာ ဘာကားတင်ထားလဲ ဆိုတာ ကြည့်ရတာ မောင်ဆိုးသွမ်းတို့ အလုပ်ပေ့ါ။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့တော့ ကျွန်တော့်ကို စစ်ထဲ ၀င်အောင် လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ကိုသီဟတင်စိုးကြီးဟာ တီဗီဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ.......
1 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:06 AM
လျှာကို မတော်တဆ ကိုက်မိတဲ့ အခါမျိုးမှာ နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုကို ကောင်းတဲ့အမြင်နဲ့ လက်ခံဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ မြန်မာ အယူအဆနဲ့ဆိုရင် “ အင်း တစ်ယောက်ယောက်တော့ င့ါအကြောင်း အတင်းပြော နေလောက်ပြီ ” စသည်ဖြင့် သူတို့ တွေးကြပါတော့မယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ ခြေမမှာ အနာဖြစ်တဲ့အခါ ထော့နဲ့ ထော့နဲ့ သွားချင်ပါ့မလား။
နာကျင်မှုတွေ မရှိတဲ့အခါ ဘာဖြစ်မလဲ ၊ ဂရုမစိုက်ပဲ လုပ်လာမယ် ၊ နာကျင်မှုကို ခံစားရတော့မှ သတိထား ဆင်ခြင်လာမယ် ။ နောက်နောင် လျှာမကိုက်မိအောင် ဒါမှမဟုတ် ရေချိုးတဲ့အခါ ကျောမှာ ရေနွေးပူ မလောင်အောင် သတိထားလာမယ်။ သို့သော် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ နာကျင်ခံစားမှု နောက်တစ်ခါ ထပ်မဖြစ်ရအောင် ကာကွယ်ပေးဖို့ အသိဥာဏ် ဦးနှောက် ရှိပါတယ်။ “ ဒါမျိုးလုပ်ရင် ဒီလိုဖြစ်မယ် ၊ နောက်ဒါမျိုး မလုပ်နဲ့ ”
စိတ်ဆိုးတယ် ဒါမှမဟုတ် မနာလို ဖြစ်တယ် ဒါမှမဟုတ် မခံချင်စိတ်ကို နည်းနည်းဖြစ်တယ်။ ဒါတွေဟာ သာမန် ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်တွေပါ။ ယာယီအခိုက်အတန့် သာဖြစ်တာပါ။ ဒီခံစားချက်တွေ အတွက် ရင်ထဲမှာ ထာဝရ သိမ်းထားစရာ မလိုပါဘူး။ သိမ်းထားမယ်ဆိုရင်လည်း ဒါဟာ ဦးနှောက်ကို အနာဖြစ်စေတာပါ။ စိတ်ဓတ်အနာပေ့ါ ။ ဒါကြောင့်
“ တခြားလူတွေကို ထိန်းချုပ်နိင်ဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ”
“ တခြားလူတွေ ကိုယ့်လို ပြုမှုဖို့ မမျှော်လင့်ပါနဲ့ ”
“ ကိုယ်ပျော်ရွှင်ဖို့ တခြားလူတွေကို မျှော်လင့်မထားပါနဲ့ ”
အရင်က အတိုင်းပဲ အတွေးအခေါ်တွေ ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင် အရင်အတိုင်းပဲ ဆက်ပြီး ခံစားနေရဦးမှာပါပဲ။ ခြေမမှာ အနာဖြစ်တာ ဖိနပ်ပြောင်းစီးဖို့ သတိပေးတာပါ။ သတိပေး သတင်းစကားများကတော့ များသော အားဖြင့် သင့်ရဲ့ အတွေးကို ပြောင်းလဲပစ်လိုက်ပါ။
“ ရုပ်ပိုင်းနဲ့စိတ်ပိုင်း နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ဒီအတိုင်း မပြောင်းလဲဘဲ ဆက်လုပ်နေရင် နာကျင်မှုတွေ ဆက်ခံစားနေရဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ် ”
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 5:34 AM
ကျွန်တော်နဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ လူတစ်ချို့ရှိနေကြသည်။ စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြင့် ကျွန်တော် စိုက်ကြည့်မိတော့ အော် မြန်မာတွေကိုး ။ ဟုတ်တယ် ဒါမြန်မာတွေ ။ မြန်မာစကားပြောတယ် ၊ ဆန်စားတယ် ၊ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းတယ် ၊ ယဉ်ကျေးသိမ့်မွေ့တယ် ၊ ကူညီတက်တယ် ၊ အားနာတက်တယ် ။ ပေးကမ်းစွန့်ကျဲ တဲ့စိတ်ရှိတယ် ၊ မဟုတ်မခံတက်တဲ့ ဟန်ပန်ရှိတယ်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သူတို့ရပ်နေရာ ဒေသနှင့် ကျွန်တော် ဝေးကွာပေမယ့် ကိုယ့်လူမျိုးခြင်း ခင်မင်ရင်းနှီးသော စိတ်အခြေခံဖြင့် ရင်းနှီးခင်မင်စွာ နုတ်ဆက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
အပြန်အလှန် အားဖြင့်၎င်း ၊ မတက်သာသော အားဖြင့်၎င်း ပြန်လည်နုတ်ဆက်ကြသလို တစ်ချို့ဆိုလျှင် မတူမတန် သလို အားဖြင့်၎င်း တုံပြန်ပြောဆိုတက်ကြသည်။ ထားတော့ လူတစ်ကို စိတ်တစ်မျိုး ဆိုကြသည့်အတိုင်း အထူးတလှယ် မခံယူလိုက်။ တစ်ယောက်နှင့် တစ်ယောက် ခယနေဖို့ မလို ၊ အောက်ကျို့နေဖို့ မလို ၊ သို့သော် အပြန်အလှန် လေးစားမှု ရှိနေသင့်ကြသည်။
လူတစ်ယောက်၏ စိတ်ဓတ်အမှန်ကို သိနိင်ဖို့ မလွယ်ကူပေမယ့် သူ၏ လုပ်ရပ်များက စိတ်ဓတ်ကို ဖော်ပြနေတက်ကြသည်။ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ ကိုယ့်ခံယူချက်နှင့်ကိုယ် ၊ ကိုယ့်ယုံကြည်မှုနှင့် ကိုယ် ရှိသည်။ လွတ်လပ်စွာ နေထိုင်နိင်သည်။ လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုလုပ်ကိုင် နိင်ပါသည်။ သို့သော် စကားပြောတက်ဖို့ လိုအပ်သည်။ “ အသုံးမကျဘူး ” ဟုပြောမည့်အစား “ လုပ်ပုံကိုင်ပုံမှားနေတယ်ဟု ” ထောက်ပြပေးသင့်သည်။
လူဆိုးတစ်ယောက်သည် လူကောင်းဖြစ်ရန် အလားအလာရှိသည်။ သို့သော် နဂိုကောင်းနေသည့်လူ လူဆိုးဖြစ်သွားလျှင် လူကောင်းပြန်ဖြစ်ရန် လွယ်ကူမည်မဟုတ်ဟု ကျွန်တော် ထင်မြင်မိသည်။ အဓိက ပြဿာနာက ဘာလဲ ဆိုတာ မသိဘဲနှင့် လူတွေအား မကောင်းမပြောသင့်ကြောင်း တွေးထင်မိပါသည်။
အဋ္ဌရသ (၁၈) ရပ်ဆိုတာ.....
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 8:50 PM
ယောင်္ကျားတို့ တပ်အပ်တဲ့ အဋ္ဌရသ (၁၈) ရပ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ လူတိုင်းကို လိုက်မေး ကြည့်ရင် တော်တော်များများ မသိကြပါဘူး။ ကျွန်တော်လည်း မသိပါဘူး။ သာမန်အားဖြင့်တော့ ဂဏန်းသင်္ချာတွက်ချက်ခြင်း ၊ မြှားပစ်လေးပစ် အတက် တက်ကျွမ်းခြင်း ဒါတွေကို ဇာတ်တော်တွေထဲက စာဖတ်သူ ဖတ်ဖူးပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ စာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်ရှုရင်း တွေ့ခဲ့မိတာကြောင့် ဗဟုသုတ အလို့ငှာ ပြန်လည် ဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အကြားအမြင် အတက် ( သုတိ )
ဓမ္မသတ် အတက် ( သမ္မုတိ )
အရေအတွက်နှင့် ဆိုင်သော ဂဏန်းအတက် ( သင်္ချာ )
တံစဉ် စူးဆောက် စသော အတက် ( ယောဂါ )
လူတို့အား ဆိုဆုံးမရာသော နီတိကျမ်းအတက် ( နီတိ )
ယာယီ ယတြာစသော ဗျာကရိုဏ်းအတက် ( ၀ိသေသကာ )
စောင်းငြင်းကဗျာ လင်္ကာအတက် ( ဂန္ဒဗ္ဗာ )
လက်ဆစ်ချိုး၍ ရေတွက်သော အတက် ( ဂဏိကာ )
ဒူးလေး လင်းလေး အတက် ( ဓနုဘေဒါ )
စကားဟောင်း အတက် ( ပုရာဏာ )
ဆေးအတက် ( တိကိစ္ဆာ )
ရယ်ရွှင်မှု အတက် ( ဣတိဟဿ )
ဗေဒင် အတက် ( ဇောတိ )
လှည့်ပတ်တက်သော အတက် ( မာယာ )
ဆန်းကျမ်း အတက် ( ဆန္ဒာတိ )
သံတမန် အတက် ( ကေတု )
မန္တန်အတက် ( မန္တာ )
သဒ္ဒါအတက် ( သဒ္ဒါ )
ပျော်ရွှင်သော သောကြာနေ့ ညနေခင်း ဖြစ်ကြပါစေ။
1 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 4:32 AM
မှန်ထဲမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ကြည့်ပြီး ဒီလို ပြောခဲ့ဖူးသလား။
“ ငါ့ရဲ့ မျက်နှာက ဒါမျိုးမဟုတ်ရင် ၊ ကိုယ်လုံးက ဒါမျိုးမဟုတ်ရင် ၊ နှာခေါင်းက ဒါမျိုးမဟုတ်ရင် ကောင်းမှာပဲ ” ကိုယ့်ဘ၀ကို ပြန်တွေးပြီး သင်ဒီလို ပြောခဲ့ဖူးသလား ။
“ ဘာကြောင့်များ တခြားသူတွေ သိပ်ပြီးတော့ ပါရီမီထူးနေကြ ၊ ဥာဏ်ရည်တွေ ထက်မြက်နေကြရတာလဲ ” ငါကရော ဘာကြောင့် သူတို့လဲ မဖြစ်ရတာလဲ ” ဆိုတဲ့ အတွေး ကျွန်တော်တို့ တော်တော်များများ တွေးဖြစ်ကြပါလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့် ဒီနေရာမှာ အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အချက်က -
ပင်ကို အရည်အချင်းရှိတာ ၊ ရုပ်ရည်ချောမောတာ အလွန်အသုံးကျပါတယ်။ သို့သော် ဥာဏ်ကောင်းသူတွေ ၊ ရုပ်ရည်ချောမောသူတွေ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများကြီးပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလူတွေကို ကျွန်တော်တို့ အားကျနေဖို့ မလိုပါဘူး။ တချို့သော ဥာဏ်ကောင်းသူ ၊ ရုပ်ရည်ချောမောသူတွေဟာ စိတ်ကသိကအောက် ဖြစ်စရာတောင် ကောင်းပါသေးတယ်။
အေဘရာဟမ် လင်ကွန်း ၊ မာသာ ထရီဇာနဲ့ မဟတ္တမ ဂန္ဓီ တို့လို့ သမိုင်းမှာ လူကြည်ညို လေးစားခံရသူတွေဟာ ရုပ်ရည်လည်း မချောကြပါဘူး။ ဥာဏ်လည်း အထူးကောင်းသူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး။ ရုပ်ရည်ချောတာ ၊ ဥာဏ်ကောင်းတာတွေထက် ကျွန်တော်တို့ တန်ဖိုးအထားဆုံး အရည်အချင်းကတော့ ရိုးသားခြင်း ၊ သတ္တိရှိခြင်း ၊ ဇွဲရှိခြင်း ၊ စိတ်ထားမွန်မြတ်ခြင်း နှင့် မိမိကိုယ် မိမိ နှိမ့်ချခြင်းတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီအရည်အချင်းတွေကို ကြည့်လိုက်ရင် သင်ဟာ ဒီအချက်တွေနဲ့ ပြည့်စုံပြီး မွေးဖွားလာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီအရည်အချင်းတွေကို ပြုစုပျိုးထောင် ယူရပါမယ်။
ကိုယ်ပိုင် ရိုးသားမှု ၊ ဆုံးဖြက်နိင်မှု ၊ စိတ်ထားမွန်မြက်မှု ၊ နှိမ့်ချဆက်ဆံတက်မှု ၊ သတ္တိရှိမှုတို့ကို ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် ပြုစုပျိုးထောင် ဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ ကိုယ့်ကို ကိုယ် ဘယ်လိုခံစားမိသလဲဆိုတာ ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲ ရှိတယ် ”
2 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 2:57 AM
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် ဂျီတော့်ခ်မှာ တင်ထားတဲ့ ပုံလေးကို ကြည့်ရင်း စိတ်ဝင်စားလို့ လင့်ခ်တောင်း ကြည့်မိပါတယ်။ အကောင့်ဖောက်ပြီးတော့ ဖော်ပြထားတဲ့ ပုံလေးတွေမှာ ကိုယ်ပုံလေးတွေ သူငယ်ချင်းပုံလေးတွေ လျှောက်ထည့်ကြည့်တော့ ဘာရယ်မဟုတ် စိတ်ချမ်းသာမှု အနည်းနှင့်အများတော့ ရကြသည်။ နောက်ခံ Frame လေးတွေကလည်း လှလှပပလေးတွေ ဆိုတော့ ချစ်သူ ရည်စားကို ပေးဖို့ကတော့ ကောင်လေးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ကောင်မလေးတွေ အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တော့ ရနိင်မည်ထင်တာကြောင့် စေတနာ အကျိုးမျှော်၍ ပြန်လည် ဖောက်သည်ချမိလိုက်ပါသည်။
ဟောဒီလို နှစ်ယောက်တွဲ မျက်နှာလေးတွေနဲ့ ကြည်နူးလို့ရသလို
ဟောဒီလို နှင်းဆီပန်းလေးနေရာမှာ ကိုယ့်ချစ်သူပုံလေး ထည့်လိုက်ရင်ဖြင့်
စိတ်ဝင်စားလျှင်ဖြင့် ဒီဆိုက်လေးကို သွားလိုက်ပါ။ အဲဒီမှာ Account အရင် ဖောက်လိုက်ပြီး Browser မှာ ပလက်ဂင် လုပ်လိုက်တာနဲ့ စတင်အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ အဆင်ပြေကြမယ်လို့ မျှော်လင့်မိပါတယ်။
1 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 1:19 AM
ကျွန်တော်တို့ တော်တော် များများ စိတ်ပူတက်ကြပါသည်။
အလုပ်ကိစ္စ ၊ သားသမီးကိစ္စ နောက်ပြီး အိမ်နီးနားချင်းတွေက ဘယ်လို ထင်ကြမလဲ ၊ စသည် စသည်ဖြင့် စိတ်ပူ စရာတွေ မျိုးစုံ ရှိနေတက်ကြသည်။
တစ်ချို့လူတွေက “ ခင်ဗျား စိတ်ပူ သင့်တာပေ့ါ ” လို့တောင် ပြောတက်ကြတယ်။
ဒါပေမယ့် စိတ်ပူတာဟာ ဘာမှ သုံးမရတာထက် ပိုဆိုးတယ်။
ပထမ - ကံကြမ္မာဆိုးတွေကို ဖိတ်ခေါ်တယ်။
ဒုတိယ - သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် မကောင်းဘူး။
ဒါဆိုရင် စိတ်ပူစရာတွေကို ဘာလုပ်သင့်သလဲ........
ပထမ လုပ်စရာရှိတာကို အရင်လုပ် ၊ စိတ်ပူစရာကို ရက်အကန့်အသက်မရှိ ရွှေ့ဆိုင်းပစ်လိုက်ပါ။ ဒါဟာ ဘ၀မှာ အကျိးရှိအောင် နေတက်တဲ့ လူတွေရဲ့နည်းပါပဲ။ စိတ်ပူနေတယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ဘာသာ မေးခွန်းထုတ်ကြည့်။ အခုပြဿာက ဘာလဲ။ ဒါဆိုရင် သင်ဘာကို တွေ့ရမလဲဆိုတော့ အသက်ကို ခြိမ်းခြောက်နိင်တဲ့ အခြေအနေမျိုးက လွဲလို့ သင့်မှာ ဘာပြဿာနာမှ မရှိတော့ဘူး။
ကျွန်တော်တို့ဟာ ဒုက္ခ သုက္ခတွေ ဖြစ်တက်ပါတယ် ၊ နေထိုင်မကောင်း ဖျားနာတာလည်း ဖြစ်တက်ပါတယ် ၊ ငွေကြေး အခက်အခဲလည်း ကြုံတက်ပါတယ် ၊ ဒါပေမယ့် အဲဒီလို အခက်အခဲတွေ ကြားမှာ တုန်လှုပ် ချောက်ချားနေတဲ့ ယုန်တစ်ကောင်လို ဖြစ်နေဖို့ အကြောင်း မရှိသင့်ပါဘူး။
အဲဒီလို အခက်အခဲတွေက အချိန်ပိုင်းလေး အတွင်းမှာ တစ်ခုပြီးမှ တခု ဖြေရှင်းနိင်ပါတယ်။ ရှေ့ဘာတွေ ဖြစ်မလဲလို့ ကိုယ့်စိတ်က ကြိုတွေး ပူပန်တာကသာ ကိုယ့်ကို ဒုက္ခပေးတာပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကလည်း ရှေ့လျှောက် ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ အတွေးဆီကို ရောက်သွားတက်တယ်။
ပစ္စုပန်မှာပဲ နေ ၊ ဒီနေ့ ကိုယ်လုပ်နိင်တာကို လုပ် ၊ ပူပန်စရာတွေကို ခေါင်းထဲက ထုတ်ပစ်လိုက်။
ကိုယ့်ဘ၀ကိုယ် ပြန်ကြည့်။ ကနေ့အထိ အသက်ရှင်နေလို့ မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်မျိုး ရှိခဲ့ဖူးလား။ သေချာတယ် မရှိခဲ့ပါဘူး။ မျက်မှောက်ကာလ အချိန်မှာ ဖြေရှင်းနိင်ပါတယ်။ ဒါဆို ဘာလဲဆိုတော့ ရှေ့ကို ကြိုတင်ပူပန်တာက ဒုက္ခပေးတာပါ။
“ တစ်ယောက်ယောက်က သင့်ကိုမေးမယ် ။ “ ဒီကိစ္စအတွက် စိတ်မပူဘူးလား ” ၊ သူတို့ကို ပြောလိုက်ပါ “ စိတ်ပူချင်တာပေ့ါ ၊ ဒါပေမယ့် ပူစရာကို မကြံဖူးသေးဘူး လို့ ”
သူငယ်ချင်းများ နှင့် ပိုက်ဆံ
0 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 7:00 PM
ဂျင်မ် ဆိုတဲ့ သူတစ်ယောက်ကို ကျွန်တော် သိခဲ့ဖူးတယ်။ ဂျင်မ်ဟာ သူ့ဘ၀တလျှောက်လုံး ကြိုးစားလာခဲ့တဲ့လူ ဖြစ်တာကြောင့် သူဟာ ဒေါ်လာ သန်းနဲ့ချီပြီး ကြွယ်ဝချမ်းသာ လာခဲ့ပါသည်။
သူ့ဘ၀မှာ ကောင်းကောင်း နေရတယ်။ ခရီးတွေ အများကြီး သွားဖူးခဲ့တယ် ။ အစားအသောက် အကောင်းစားတွေ စားတယ် ၊ ၀ိုင်အကောင်းစားတွေ သောက်တယ် ။ သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေကို ဧည့်ခံကျွေးမွေးရတာ ၀ါသနာပါတယ်။ သည်းခံစိတ်ရှည်တက်သူ ၊ စိတ်ထားကောင်းပြီး ရက်ရောသူ တစ်ယောက် အဖြစ် သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေများကြားမှာ ထင်ရှားပါတယ်။
အဲ....မကြာသေးခင်က ဂျင်မ်က သူ့သူငယ်ချင်း တက်ဒ်အကြောင်း ပြောပြပါတယ်။ တက်ဒ်ဟာ အမြဲလိုလို ဘိုင်ကျနေတက်ပါတယ်။ ပိုက်ဆံ မရှိပေမယ့် တက်ဒ်ကို ခင်ပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော့် အိမ်မှာ သူမကြာခဏ လာလာနေတက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ အားလပ်ရက် ခရီးထွက်တဲ့အခါ တက်ဒ်ကို ခေါ်သွားလေ့ ရှိတဲ့အပြင် နာမည်ကြီး စားသောက်ဆိုင်တွေမှာလည်း အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ၀ယ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စေတာကတော့ အပေါင်းအသင်း ဖြစ်လာတဲ့ ဆယ်နှစ်အတွင်းမှာ သူ ကျွန်တော့်ကို တခါမှ ၀ယ်မကျွေးပါဘူး။ ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံး ဒါမှမဟုတ် ကော်ဖီတခွက်တောင်မှ မတိုက်ဖူးခဲ့ပါဘူးတဲ့။
ဒီအတွက် ဂျင်မ် စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့တာက သူ့သူငယ်ချင်းရဲ့ စိတ်နေသဘောထားပါ။ ဒါကို သူက သိပ်ကို အလေးထားခဲ့ပါတယ်။ “ ပိုက်ဆံမရှိသော်လည်း သူငယ်ချင်းက စေတနာရှိတယ် ” ဆိုတဲ့ စိတ်ထားကို သူက လိုချင်ခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက် မကြာခင် တက်ဒ်မှာ ၀မ်းနည်းစရာ သူငယ်ချင်း ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာပါပဲ။
ထိုဖြစ်ရပ်ကဲ့သို့ပင် လောကမှာ လူသားများစွာသည် ကြုံတွေ့နေရမှာပါပဲ။ ကိုယ့်အခြေအနေကို အကြောင်းပြပြီး သူတပါးရဲ့ လိုက်လျောမှု့ကို အခွင့်အရေးယူ ၊ ပြန်လည် အသိအမှတ် မပြုတက်သူဟာ တက်ဒ်ကဲ့သို့ သူငယ်ချင်းကောင်းများစွာ ၊ မိတ်ဆွေကောင်းများစွာ ဆုံးရှုံးခြင်းနဲ့ တွေ့ကြုံရမှာပါ။
“ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဘယ်သူ ပိုက်ဆံအိတ်ကို လက်အရင်ဆုံး ရောက်တယ် ၊ ဘယ်သူ ပိုက်ဆံအိတ်ကို လက်နောက်မှ ရောက်တယ် ၊ ဘယ်သူ ပိုက်ဆံအိတ်ယူလာဖို့ အမြဲမေ့လျော့တက်တယ်ဆိုတာ သင်သိပြီးသား ဖြစ်မှာပါ ”
နောက်ပြီး သင်သတိထားဖို့က သင့်သူငယ်ချင်းတွေကလည်း သင်ဘယ်လို လူမျိုးလည်း ဆိုတာ တွက်ဆ စဉ်းစားကြမယ် ဆိုတာပါပဲ။
“ သင့်သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ထက် ပိုချမ်းသာမယ် ဆိုပါစို့ ၊ သင့်မှာ သုံးစရာ အပို တစ်ဒေါ်လာပဲ ရှိမယ်ဆိုရင် အဲဒီ တစ်ဒေါ်လာကို သုံးလိုက်ပါ ”
Andrew Matthews ၏ Happiness Now စာအုပ်မှ ဘာသာပြန်ဆိုပါသည်။
0 comments Posted by ဆိုးသွမ်း at 3:00 AM
ကိုဂျူလိုင်ပြောတဲ့ ဂျပန်ရိုးရာ ဗေဒင်လေးကို သွားကလိလိုက်တာ။ ကျွန်တော့်က မြေကြီးအဖွဲ့ ၀င်ပေ့ါ။ ဘာပြောထားလဲ ဆိုတော့....
You are Orange Monkey type, who is very friendly.
People find you easy to get on with.
On the other hand, you are not good at startingarelationship, and do not haveaway with words.
You tend to keepadistance in personal relationships.
Although you tend to be rather nervous, you can overcome that weakness with your sophisticated intelligence and sense of humor.
You are notadifficult person, and will not stan against on opposed ideas.
You haveagood negotiation tactics by leaving room for the other side to compromise.
However you can be obstinate in that you will not suck up, or bend your theory.
Putting into action is most important to you.
You may luck consideration, and because you believe that result will follow, you tend to plan things as you go.
You are quick learner andaskilful person, so even if you face difficult situation, you can overcome that without much difficulty.
You are very responsible person, and you tend to work for others even by neglecting yourself.
This naturally attracts other people to you.
You also tackle and challenge things with confidence.
You haveagood head for business, so you will be successful in anything you decide to do.
ပါတဲ့။ စိတ်ဝင်စားလျှင်ဖြင့် ဒီနေရာလေး ကိုသွားလိုက်ပါ။